Hay’adda IMF oo ansixisay qorshaha maali-gelinta deyn cafinta Soomaaliya | Xaysimo
Home War Hay’adda IMF oo ansixisay qorshaha maali-gelinta deyn cafinta Soomaaliya
Hay’adda IMF oo ansixisay qorshaha maali-gelinta deyn cafinta Soomaaliya
Guddiga fulinta hay’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ansixiyey qorshe maali-gelin oo IMF ka caawin doona inay bixiso saamiga uga aadan deyn cafinta Soomaaliya, sida ay sheegtay agaasimaha IMF Kristalina Georgieva oo bayaan soo saartay.
Georgieva ayaa deyn cafinta Soomaaliya ku qeexday ahmiyadda IMF, waxaana ay sheegtay inay dhiirigelisay taageerada xubnaha IMF.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyleh ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka kusoo dhoweeyey tallaabada ay qaadeen xubnaha IMF.
“Waxaan u mahad-celineynaa dhammaan saaxiibada sii wada taageerada ay siinayaan safarka aan ugu jirno inaan helno deyn-cafin. Waxaan sii wadi doonaan is-beddelada xooggan” ayuu yiri Beyleh.